စနေလင်း| February 19, 2013 | Hits:17,683
5 | | ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်နှင့် Sky Net ရုပ်/ သံ တို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ထို့အပြင် Sky Net ရုပ်သံလိုင်းမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် FIFA U – ၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် FIFA U – ၁၇ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် FIFA သဲသောင်ပြင် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် FIFA U – ၁၇ အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် FIFA U – ၂၀ အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ များကိုလည်း ထုတ်လွှင့် ပြသမည် ဖြစ်ကြောင်း Sky Net မှ အကြီးတန်း အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
ဘရာဇီးလ် ရှုံးလို့ ခေါင်းတုံး တုံးဦးမလား
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website K Z Y Htun February 19, 2013 - 7:12 pm	Good news!!!